स्वास्थ्य पेज » कसरी बढाउँछ प्रोन पोजिशनले अक्सिजन ? कसरी बढाउँछ प्रोन पोजिशनले अक्सिजन ? – स्वास्थ्य पेज
कसरी बढाउँछ प्रोन पोजिशनले अक्सिजन ?
कोरोना संक्रमण वढेसँगै त्यसबाट बच्नका लागि वा रोकथामको लागि विभिन्न उपाय खोज्न थालिएको छ । यसमा आधुनिक तौरतरिकादेखि प्राचिन विधीहरुसम्म छन् । जस्तो कि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कायम राख्ने, प्रोन पोजिशन । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएमा यस किसिमको पोजिशन अपनाउन सकिने बताइएको छ ।
जुन हिसाबले अहिले प्रोन पोजिशनबाट अक्सिजनको मात्रा बढाउने कुरा गरिएको छ, त्यसमा केही विधी पालना गर्दै पेटको बलले सुत्नु हो । यसरी सुत्दा फोक्सोको कोशिका खुल्छ र अक्सिजनको मात्रा बढाउन सहयोग गर्छ । मेडिकल साइन्सको दुनियामा प्रोन पोजिशनको प्रायेग बर्षौदेखि हुँदै आएको छ । कोरोना भाइरसले गंभिर भएका रोगीहरुमा फोक्सोको संक्रमण तिब्र फैलिएको पाइन्छ । यो संक्रमण यति धेरै हुन्छ कि मान्छेलाई सास फेर्नै गाह्रो हुन्छ । यसले गर्दा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ । यसैले कोरोना संक्रमित रोगीले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । अक्सिजनको मात्रा कसरी पुरा गर्ने त ? यसको प्राकृतिक र सरल विधी हो, प्रोन पोजिशन । क्षणिक रुपमा भएपनि यसले राहत दिन्छ ।